တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေဟာ အော်စကာဆုတွေတောင် ရယူနိုင်လောက်တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အပြည့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကောင်လေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို အပြင်းထန်ဆုံး/ အနက်နဲဆုံး သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ထုတ်ပြတတ်ကြပါတယ်။ သင့်မှာ ကင်မရာတစ်လုံးသာရှိမယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်လေးတွေက ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်တရာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကနေ့မှာ ဒီလိုခံစားချက်တွေကို အပြင်ဘက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ပြတတ်တဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ တစ်ချို့အမူအရာလေးတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
၁။ သခင်က နောက်ခုန်မှာ ပြောင်းထိုင်လို့ ပြောလာသောအခါ
၂။ ကြောင်တစ်ကောင်အတွက် ရေချိုးတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေမနေခဲ့ဘူး
၃။ ငါ့ရဲ့ porridge တွေကို ဘယ်သူစားလိုက်တာလဲ??
၄။ ဒီရေချိုးကန်က King-size bathtub လို့ ဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ?
၅။ ငါ မင်းကို စောင့်နေတာကြာပြီ။ Human…..
၆။ ဒါပေမယ့် …ငါအပြင်ကို ထွက်ချင်တယ်လေ…
၇။ ရေမချိုးခင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မျက်နှာအနေအထား…
၈။ အမ်…ငါ့ကို ပြောနေတာလား…..???
၉။ တစ်ခုခုကို ကြံစည်နေတဲ့ ပူးလေး
၁၀။ မွေးနေ့အတွက် ခြေအိတ်လေးပဲရတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ အကြည့်
၁၁။ တစ်ကြိမ်လောက် လူသိသွားတာနဲ့ တစ်သက်လုံးအောင်မြင်ကျော်ကြားနေလိမ့်မယ် (အဲ့တော့ လူမြင်အောင် လုပ်ရမယ်)
၁၂။ သခင်ပြောတော့ မိုးမရွာပါဘူးဆို **…။
၁၃။ မှားခဲ့ပါတယ်..သခင်။ တောင်းပန်ပါတယ်…။ ဆာရာငဲရော်…
၁၄။ အဲ့ဒါ မြောင်မလုပ်ဘူးပါဆို….။ လုံးဝမလုပ်ဘူး…ကျိန်ရဲတယ်လို့။
၁၅။ သခင် TV ကြည့်နေစဉ် သခင်က အဖက်မလုပ်သောအခါ…။
၁၆။ သခင်က တစ်ခုခုစားနေသောအခါ…
၁၇။ အမေက ခေါင်းကို အပြင်မထုတ်ရဘူးလို့ ပြောသောအခါ…
၁၉။ သခင်ဆီမှာ အစာတောင်းနေသော မျက်နှာ….။
၂၀။ ”ငါကောင်လေးတောင် တော်တော်လေး ဆရာကျနေပြီပဲ”ဟူသော အတွေးဖြင့် ကောင်လေးကို judge လုပ်နေသော အကြည့်။
ဘယ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်က သင့်ကို ရယ်မောစေပါသလဲ? သင်အကြိုက်ဆုံးအကောင်လေးကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေအပေါ် ဆက်လက်လွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သလို အနုပညာရှင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကို ရပ်တန့်ပြီးမနေခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိုရိုနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကိုတောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ၁။ New Orleans က Street Art နံရံရဲ့...